Accueil > Gazetin'ny nosy > Hvm sy Tim : Mitetika hamatotra an-dRazafimahefa Herimanana
Hvm sy Tim : Mitetika hamatotra an-dRazafimahefa Herimanana
Andrimpanjakana goavana eto amin’ny tany sy ny fanjakana ny Antenimierandoholona. Matoa izy no napetraka ho laharana faharoa eo amin’ny antanantohatry ny andrim-panjakana eto dia goavana izy izany. Tsy hifanazava ny amin’ireo eson-teny nataon’ny HVM sy ny Tim isika, momba ny hoe “lazaina fa andrimpanjakana mandany vola nefa ihazakazahan-dry zalahy mpiara-dia amin’ny filohampirenena”. Satria andrimpanjakana mbola voafaritry ny lalampanorenana ny fisiany, ary voatsipika mazava ao anatin’ny lalampanorenana koa ny andraikiny , dia ny fanaovan-dalàna, ny fiahiana ny vondrombahoaka itsinjaram-pahefana ary ny fanoloran-tsaina ny governemanta amin’ny raharaha ara-toekarena sy ara-tsosialy, dia tsy maintsy miantoka ny fahombiazan’izany andraikiny izany izy.
Eo anatrehan’izany, mitaky olona haingam-piasa sady mahomby, havanana sy manana fahavitrihana ary indrindra “mahatoky” ny antokon-draharaha (direction) sy ny sampan-draharaha (service) ary ny fampiantsorohana andraikitra isan-tsehatra ao.
Jereo fotsiny fa rehefa miova ny filohampirenena dia ireo toerana saro-pady iankinan’ny fampahombiazana sy ny tsiambaratelon’ny asa dia miova avokoa, toy ny mpanampy akaiky ny filoha (assistants), ny mpandraharaha ankapobeny (sekretera jeneraly), ny talen’ny kabinetra (directeur de cabinet), ny mpisahana ny fitantanam-bola (directeur financier), ny tompon’andraikitry ny serasera (directeur de communication) sy ny hafa…. Mila olo-mahatoky ny raharaha saro-pady amin’ny andrimpanjakana ambony sady goavana toy ny Antenenimierandoholona.
Manipika izany izahay satria mihazakazaka manao sakaizan’ny mpandresy ao amin’ny Filohan’ny Antenimierandoholona, Herimanana Razafimahefa, ny ankamaroan’ireo efa “nanana tanana efa zatra nitsotra” nandritra ny fitondran’ny Tim sy ny HVM an’io andrimpanjakana io. Miseho azy ho havanana sy manana traikefa amin’ny asa aman-draharaha ao. Mandady ny trambo e ! Mandambolambo ny filohan’ny Antenimierandoholona, mitady lalana any amin’ireo mpikambana ao amin’ny birao maharitra…. mitady lalana any amin’ny vondron-kery “IRD-IRMAR”.
Mila mailo sy mitandrina ny filoha Razafimahefa Herimanana, satria ny sasany amin’izy ireo dia miandrandra ny hitohizan’ny fitavanana (tombontsoa), ny sasany mihevitra ny hamingana satria mbola nanamafy ny fatoran’ny tadim-poitrany tamin-dry Rivo Rakotovao sy ny namany. Mety hampiseho fihetsika tena mampalahelo ny sasany. Ny hafa hanaratsy ny teo aloha notompoiny….
Vita omaly izao ny famindram-pahefana teo amin’ny mpitantana vaovao ao amin’io Antenimierandoholona io sy ny teo aloha, ka hiroso amin’ny fampandehanan-draharaha ny vaovao. Mitaky fahaiza-mampanjary sy mampahomby ary mampivaingana haingana ny raharaha ny vahoaka, indrindra fa ireo anay amin’ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana.
Ilaina ny mamantatra ny sasany an’ireo efa mihetsiketsika be ao, ary na ny fianakaviamben’ny mpiasan’ny Antenimierandoholona na ny mpiara-mitolona isan-tokony dia mihevitra fa ny tombontsoam-bahoaka no lohalaharana tsy maintsy katsahin’ny Antenimierandoholona fa tsy ny fifampizarana tombontsoa manokana toy ny mahazatra hatrizay .
Voafaritra mivantana, ohatra, ireto olona ambara anarana manaraka ireto, izay mitady lalana mafy ho tena havanana amin’ny fitantanana ny raharaha eo anivon’ity andrimpanjakana ity. Mitetika mafy ny ho talen’ny kabinetran’ny filoha Razafiamahefra i Jacky. Miandrandra ny ho Sekretera jeneralin’io andrimpanjakana io Rtoa Mirana. Mihevi-tena ho olona akaiky sy itokisan’ny filoha Razafimahefa ka efa maneho ny maha-izy azy Rtoa Felana ka hoe izy no ho “assistante” (sp) ao. Efa misora-tena ho olo-mahatoky an-dRazafimahefa amin’ny fitantanam-bola Ingahy Todisoa. Mbola misy hafa fa farafahakeliny, toerana saro-pady ireo ka tsy olona toa an’ireo no hiandraikitra an’izany.
Ankoatra io, araka ny voalaza etsy aloha, mitana anjara-toerana goavana ny Antenimierandoholona amin’ny fampandrosoana miainga eny ifotony. Tsy maintsy ireo vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana izany no fototra iaingan’izany. Matoa tsy nahomby izany hatrizay dia ireo olona nampisahanina ny raharaha no tsy mahavita azy, ankoatry ny tsy fiheveran’ny loholona teo aloha ny maha-zava-dehibe ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana.
Mitana anjara toerana goavana koa ny fiaraha-miasa amin’ny any ivelany (cooperation exterieure) eo anivon’io andrimpanjakana io, satria misy ny fiaraha-miasa iombonana (cooperation bilaterale) izay tokony ho nahafahana nampahomby ny asa fampandrosoana ankapobeny any amin’ireny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana ireny. Noho ny kiantrano antrano nanjaka teo aloha anefa dia tsy tafavoaka ny fisitrahantsika Malagasy ny anjara-zo sy anjara-tombontsoantsika teo anivon’ny fiaraha-miasa iraisampirenena, ka takian’ny vanim-potoana ankehitriny ny hampivaingana izany.
Ny dikan’izany, mitandrema ianareo mpitantana vaovao ao amin’io Antenimierandoholona io tsy ho sodokan’ny lango malefaka fa mba hampiseho hoe “vondron-kery manana ny maha-izy azy ara-politika ny “IRMAR” fa tsy vondrombondron’olona mpiara-mitady tombontsoa mânokana fotsiny. Raha ny rariny aza dia takian’ny vanim-potoana ny hanadiovana hatrany ifotony ity andrimpanjakana ity satria misy hatramin’ny manao diplaoma sandoka ange ao e !